असार पन्ध्र: किन खानुपर्छ दहि चिउरा ? यस्ता छन् फाइदाहरु - Saptakoshionline
असार पन्ध्र: किन खानुपर्छ दहि चिउरा ? यस्ता छन् फाइदाहरु
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ १५, २०७७ समय: १:३७:०१
काठमाडौं । आज असार पन्ध्र अर्थात् दहि चिउरा खाने दिन । हामी असारलाई धान दिवस मात्र भन्दैनौं आजको दिन दहि चिउरा खाएर मनाउछौं । नेपाल आफैमा बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक राष्ट्र हो । त्यसैले हाम्रो रहनसहन अनि खानपान पनि मौसम र समय अनुसार नै परिवर्तन हुन्छ ।
हामीले आज खाने दहि चिउराको पनि आफ्नै विशेषता छ । चिउरा कार्बोहाइड्रेडको स्रोत हो। दहीमा चिउरा मिसाएर खाँदा कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, क्याल्सियम, पोटासियम र भिटामिन पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
गर्मीमा धान रोप्दा पसिनाको माध्यमबाट जाने पानीलाई समेत यसले परिपूर्ति गर्ने भएकाले दहीचिउरा खाने चलन बसाएको हुनुपर्छ हाम्रा पुर्खाहरुले। दहीचिउरा चाँडो तयार पार्न सकिने मिठो र पोषिलो खाजा भएकाले पनि कामको चाप भएका बेलाको खाना वा खाजाका रुपमा यसलाई रोजिएको हुनुपर्छ।
दहीचिउरा खाँदा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यो जुनसुकै उमेर समूहले पनि खान सक्छौं। जुन बेला पनि खान सकिन्छ।
दूध फाटेर बन्ने दहीमा क्याल्सियम, सोडिमय, पोटासियम र भिटामिन पाइन्छ। यसमा शरीरमा फाइदा गर्ने गुड ल्याक्टोब्यासिलस ब्याक्टेरिया समेत हुन्छ। चिउरामा भने कार्बोहाइड्रेड, आइरन र प्रोटिन पाइन्छ।
धानलाई भिजाएर ओखल वा मिलमा कुटेर तयार गरिएको खाद्यपदार्थ नेपाली खाना चिउराको ठूलो महत्व छ। चिउरालाई चोखो खाद्यपदार्थका रुपमा पनि लिइन्छ।
हिजोआज चिनी हालेर गुलियो बनाएर दही खाने चलन छ। चिनी हाल्नुभन्दा सिजन अनुसारका फलफूल केरा, आँप आदि मिसाएर खाँदा उपयुक्त हुन्छ। यसरी खाँदा हामीले थप भिटामिन र खनिज पदार्थ पनि पाउन सक्छौं।
दहीले चिसो लाग्ने भएकाले राति सुत्ने बेलामा खानु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। तर, ठिक्कको तापक्रममा राखिएको दही जुन समयमा खाए पनि केही फरक पर्दैन। दही फ्रिजबाट निकालिएको भएमा चाहिँ चिसो लाग्न सक्छ। दहीले कहिल्यै बिरामी पार्दैन, यदि कुनै हानिकारक किटाणुले यसमा प्रवेश पाएका छैनन् भने।
मधुमेह भएका बिरामीहरुले चिनी मिसाएको दही खानु हुँदैन। बजारको दहीमा मिठो बनाउन चिनी हाल्ने प्रचलन छ। त्यसैले सकेसम्म आफ्नो घरमा बनाएको दहीमा चिउरा मिसाएर खाँदा राम्रो। दैनिक खानामा एक कचौरा दही खाँदा स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो मान्न सकिन्छ।
– दहीले मांशपेसी र हाड बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।
– रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ।
– दही बनाउने ल्याक्टोब्यासिलस ब्याक्टेरियाले पाचन प्रक्रियामा सहयोग पुग्छ।
–दहीमा क्याल्सियम र मिनरल बढी मात्रामा पाइन्छ।
– पेट गडबडी हुँदा अर्थात् पखाला लागेको समयमा दहीको सेवन गर्दा पखाला कम हुन्छ।
– चिउरा पकाउनु नपर्ने भएकाले हामीले जुनसुकै परिकारका साथ खान सकिन्छ।
– प्रशस्त कार्बोहाइड्रेड भएकाले काम गर्न शक्ति प्रदान गर्छ।
– फलामको ओखलमा कुटेको चिउरामा आइरनको मात्रा बढी हुन्छ।
तोलाको १ लाख ३ हजार ५ सय पुग्यो
शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । सुनचाँदी व्यासायी महासंघका अनुसार बिहीबार तुलनामा १ ...
उपचाररत् कोरोना संक्रमितको मृत्यु
पाटन अस्पतालमा उपचाररत ४५ वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरूषको मृत्यु भएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णु शर्माका अनुसार ...
बीपी प्रतिष्ठान धरानमा कोरोना संक्रमणबाट एक युवाको मृत्यु
धरानः धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका क्रममा एक युवाको मृत्यु भएको छ । बुधबार राति कर...
पहिरोमा पुरिएर आमा–छोराको मृत्यु
पहिरोमा पुरिएर गएराति बैतडीमा आमाछोराको मृत्यु भएको छ। बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिका–४ बलालीका पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीय ...
माई खोलाले बगाएर १ जना बेपत्ता
ईलाम, ईलामको माई नगरपालिका-२ का १४ बर्षीय बालक रुबिन मगर माई खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका छन् । गाई बस्तु हेर्न गएका मगर बि...
करेन्ट लागेर धरानका केशरको मृत्यु
सुनसरी, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-१६ का ६५ बर्षीय केशर बहादुर गुरुङको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । बिहिवार बिहान आफ्न...
ईमेल: [email protected]m